Etu esi wụnye Alcatel's Onetouch Launcher na gam akporo ọ bụla | Gam akporosis
Anyị ga-eso otu n’ime nkuzi vidio ndị ahụ masịrị gị nke ukwuu kemgbe oge a aga m akụziri gị Etu esi wụnye Alcatel's Onetouch Launcher na ụdị gam akporo ọ bụla nke ahụ dị gburugburu ụdị nke 4.1 ma ọ bụ nsụgharị dị elu nke ya.
Maka ndị na-amaghị, Onetouch Launcher bụ ndozi nkwụsị nke njedebe nke akara French nke Alcatel, nke, na mgbakwunye na ịbụ a nnọọ, nnọọ ìhè na ọtọ Launcher, adabara ụdị ọ bụla nke gam akporo ọnụ n'ihi na ole na ole ego o nwere, na-azọrọ na-abụ otu n'ime ihe ndị kasị na kasị na-agba egbe na anyị nwere na usoro gam akporo na-arụ ọrụ. Ọ gụnyekwara ụfọdụ ihe na-atọ ụtọ dị ka nke dị na vidio mgbakwunye anyị ji bido vidiyo vidiyo ma ọ bụ nkuzi nkuzi a.
Iji malite na dị ka ọtụtụ n'ime gị ga-echeworị, nke a abụghị ngwa anyị nwere ike ibudata ozugbo na Storelọ Ahịa Google, ụlọ ọrụ ngwa ngwa maka gam akporo, yabụ nweta ngwa Alcatel Onetouch Launcher, Anyị ga- gafere otu uzo a iji nweta nbudata na mpụga na Google Play.
Ozugbo ebudatara ngwa ahụ na ngwa apk, tupu ịmalite itinye ya, nke mbụ, anyị ga-agabiga ntọala gam akporo site na ngalaba ahụ nche, mee ka igbe ga-enye anyị ike wụnye ngwa site na isi mmalite ma ọ bụ ngwa na ngwa ngwa.
Site na nke a, anyị nwere ike pịa faịlụ apk ahụ ebudatara na mbụ, wụnye ma kporie ndu obula nke Alcatel's Onetouch Launcher na-enye anyi Na ụdị ọ bụla nke ọnụahịa gam akporo, ihe ọ bụla anam na ihe nlereanya. N'ezie, ọ ga-abụrịrị ụdị nke gam akporo 4.1 ma ọ bụ nke dị elu karịa ya.
N'ime ihe dị iche iche nke Oncouch Launcher nke Alcatel na-enye anyị, ekwesiri ịmara na ọ bụ Nnọọ, nnọọ ọkụ Android Launcher na-enweghị nhazi ma ọ bụ nhazi nhọrọ gafee isi dị ka ịgbanwe akwụkwọ ahụaja ma ọ bụ tinye wijetị desktọọpụ. Iwepu nke a, nke nwere ike bụrụ nnukwu ọghọm maka ihe karịrị otu, anyị nwere ike ịsị na Alcatel's Onetouch Launcher bụ otu n'ime ndị na-ebuputa ọkụ na ọ ga-achọ arụmọrụ ka mma yana obere usoro ihe eji arụ ọrụ zuru oke.
Ka kwukwara peculiarities anyị nwere ike mata ndị ihe ngosi ngosi ngosi nke oma mgbe imeghe folda na anyị nwere na desktọọpụ, drọwa ngwa nke na-echeta ma na-ejigide ọnọdụ yana na site na isi ihuenyo ụlọ, ọ bụrụ na anyị esi n'aka ekpe gaa n'aka nri, a ga-enye anyị ọrụ agbakwunyere n'ụdị Google Ugbu a ma ọ bụ HTC Sense na Blinkfeed ya , na-echekwa ebe di anya, nke anyi ga-enwe ike ile anya ihu igwe, ozi ohuru nke faili ntanetịime nke kacha masị anyị ma ọ bụ lelee ihe omume anyị dị nso yana gụnyere nhọrọ nlegharị anya iji họrọ ọtụtụ ego site na ntanetị.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Etu esi wụnye Alcatel's Onetouch Launcher na gam akporo ọ bụla
Ọ ga-amasị m ka ị hapụ ndị nke kachasị dị na nkọwa ahụ
Zaghachi arturo Meléndez
Ọ bụ ihe na-abaghị uru, ọ na-ebudata ma ọ naghị emepe interface ya, ihe nzuzu